Qaxooti kasoo cararay Yaman oo gaaray bossaso
17th November 2020 by Barre Leave a Comment
Waxaa Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari gaaray qoysas farabadan oo kasoo cararay Colaadaha daba-dheeraaday ee ka jira dalka Yemen, kuwaasi oo soo dhaweyn loo sameeyay.
Qoysaska Qaxootiga ah oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeniyiin ayaa waxaa Dekadda Boosaaso kusoo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Daban-cad iyo xubno kale, iyagoo la geeyay Xarun loogu tala-galay qaxootiga.
Mas’uul ka tirsan Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in qoysaska Cusub ee Qaxootiga oo gaarayay 49 lagu heyn doono xarunta la geeyay, isla markaana lagu sameeyn doono tirab kooban, kadibna dib u-dejin loo samayn doono.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa kal horey u soo gaaray qaxooti farabadan oo dib u dejin loo sameeyay, isla markaana isaga soo tegay dalkooda, xili ka ay socdaan Colaado daba-dheeraaday.
Muddooyinkii u dambeeyay dowlad Goboleedka Puntland oo garab ka heysa hay’adda Qaxootiga Adduunka ee UHCR iyo hay’adda Socdaalka Dunida ee IOM ayaa qaabilayay Qaxooti kala duwan oo kasoo cararay Colaada ka jira dalka Yemen.